Marka ay dalka ka Dhacayaan Doorashooyinka Gudoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha oo la isku raacay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11th April 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Waxaa maanta la filayaa in magaalada Muqdisho lagu soo gabo gabeeyo Shirka Hogaamiyaasha Madasha Wadatashiga Qaran ee Doorashooynka dalka, shirkan oo maalintii shalay ka furmay magaalada Muqdisho.
Shirkan Waxaa ka qeyb galaya Madaxda ugu sareysa Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira, shirkan ayaana diirada lagu saarayay hanaanka doorasho ee la filayo in dalka ka dhacdo marka ay xiligeeda dhamaato Dowlada hada jirta.
Gabo gabada shirka ayaa la filayaa in laga soo saaro War-Murtiyeed ay isku raacsan yihiin dhinacyada shirka ka qeyb galaya, waxaana suurto gal ah in uu maanta dib u dhaco soo saarista War-Murtiyeedka iyo xiritaanka shirkan.
Sida aan ku heleyno Xogo lagu kalsoonana karo War-Murtiyeedka shirka laga soo saarayo waxaa lagu cadeeyay jadwalka doorashada dalka ka dhaceysa sida Waqtiga ay dhaceyso Doorashada Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya iyo Doorashada Madaxweynaha.
Bisha Agoosto ayaa la guda gali doonaa soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo gaaraya 275-Xildhibaan, iyadoona Xildhibaan walbo uu soo dooran doono 50-oday oo kasoo jeeda Beesha uu u dhashay Xildhibaanka kamidka noqonaya Baarlamaanka Soomaaliya.
Hogaamiyaasha Madasha Wadatashiga Qaran ayaa sidoo kale isku raacay in bisha September 1-da la doorto Guddoomiyayaasha Labada Golle ee Baarlamaanka cusub , waxaana xiligaa kadib xigi doona diyaar gorowga Doorashada Madaxweynaha.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa iyana la qorsheeyay in ay dhacdo bisha September 9-keeda, iyadoo Musharaxiinta geli doonaa Isreebreeb ilaa 3 Wareeg ah, waxaana Xilkaasi ku guuleysan doona Musharaxa ugu dhibcaha badan Wareegga 3-aad.
War-Murtiyeedka laga soo saarayo Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ayaana lagu faha faahin doonaa qodobada ay isku raaceen Madaxda Dowlada Federaalka iyo kuwa Maamul goboleedyada ee shirka uu uga socdo Muqdisho.